जीवनी डेमी मूर
फैशन तारा शैली
त्यो, एक मौसमी शराब जस्तै, हरेक वर्ष राम्रो र राम्रो हुँदैछ। अनियमित, उज्ज्वल, शानदार र मोहक। यो सबै, निस्सन्देह, डेमी मूरका बारे। त्यो सुन्दर तंग छ र सही छाला चिकनी छ। समय यो माथि छैन। यसको प्रमाण को रूपमा, कुनै झुर्रक र एक अभिव्यक्ति नबिर्सन।
डेमी मूर 1962 मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्मिएको थियो। बुबाको बिना उठेर धेरैले उनको परिवारलाई असफल बनाइदिए। 16 मा, डेमी एक अभिनेत्री हुन को लागि स्कूल छोडे। त्यस पछि, उनको क्यारियर सुरु भयो। 1 999 को दशकमा डेमी मूर सबैभन्दा उच्च भुक्तानी अभिनेत्रीहरूमध्ये एक हुनुभयो।
शैली "फैशनेबल डेमी मूर"
अभिनेत्रीले स्टाइलिश चीजहरूमा कहिल्यै दमन गर्दैनन्। उनीहरूको गुणस्तरको पहेलो मन पराउँछन्, फैशनेबल लुगाहरू। डेमी मूरको अन्तिम शताब्दीको शैलीको धेरै मनमोहक छ। उनको अलमारीमा धेरै पुरानो कपडाहरू, जूताहरू र सबै प्रकारका सामानहरू छन्। उनी क्लासिक आधार रंगहरू अर्थात् अर्थात् खैरो र कालो मनपर्छ।
उनको खाली समय डेमी मूरले साधारण पोशाकमा राख्छ। यो उनको मनपर्ने अनुहार जीन्स, हल्का टी शर्ट, जातीय ट्युनिक्स र ड्रेस-शर्ट हुन्। जूताबाट उनी एक सानो एड़ीमा फ्लिप फ्लप, बैलेट फ्लैट र स्यान्डलहरू मन पराउँछन्। यस अवस्थामा, उनी अक्सर 20 वर्षीया केटीको लागि गल्ती गरिन्छ, जुन धेरै चापलूसी हुन्छ। तर पनि आकस्मिक शैलीमा, यो सधैं फैशनेबल लाग््छ।
त्यो मुख्य सामान मध्ये एक धूप का चश्मा र हार मान्छ। तिनीहरू जरूरी हुनुपर्छ राम्रो र महंगी। यसबाहेक, तिनीहरू सँधै सान्दर्भिक छन् र पुरा तरिकाले विभिन्न पोशाकमा उपयुक्त छन्।
कालीनमा डेमी मूरले आँखा पपिंग कपडामा राख्छ। यस्तो सुन्दरता, र यस प्रकारको एक आंकडाले लगभग सबै शैलीहरू र सिल्जेटहरू फिट गर्छ। यो लामो, छोटो, सीधा र तातो मोडलहरूमा प्रभावशाली देखिन्छ। यो रङहरू र सजावटका साथ प्रयोगहरू।
हलिवुड डिभा देखि सौंदर्य को रहस्य
डेमी मूरको कपाल संधै चर्चाको मुख्य मुख्य विषय हो। तिनीहरू गहिरो चकलेट, सूर्यमा चमकदार, जीवित, मोटो र बलियो हुन्छन्। डेमी मूरले आफ्नो कपालको रंग परिवर्तन गर्न प्रयास गर्दैन। अब त्यो एक श्यामला श्यामला छ। सिद्धान्तमा, यसलाई फरक रंगमा कल्पना गर्नुहोस्, सजिलो छैन, तर मात्र चाहँदैनन्। त्यो यस चीजमा सुन्दर छ, र उनको लागि माया छ।
एकपटक हलिवुड दिवा पत्रकारहरूसँग साझेदारी भएपछि एकपटक उनको कपालको हेरचाह गर्छ। उनले भने कि तिनले सावधानीपूर्वक धन को चयन गर्दछ र एक शैम्पू को उपयोग गर्दछ, जसलाई उनि घोडे को माने धोए। यसको अतिरिक्त, यो मास्क, बांध, सुरक्षात्मक क्रीम र serums विभिन्न प्रकारका प्रयोग गर्दछ। आवश्यक हर्बल संक्रमण संग rinsing र एक हेअर ड्रायर संग सुखाने देखि बचाइन्छ। डेमी मूरले सुपर जटिल बालस्वास्थ्यहरू बनाउँदैन। त्यो खुसी, सुन्दर सुन्दर राखिएको छ, यहाँ सम्म कि बाल।
डेमी मूरले न्यूनतम मेकअप प्रयोग गर्दछ। यो प्राकृतिक र प्राकृतिक हुनुपर्छ। यस अवस्थामा, रङ प्यालेट उदार छ, हड़ताल छैन। खैरो र खैरो रंगको आकार मुख्य छ। आँखालाई अझ अभिव्यक्ति बनाउनको लागी, डेमी मूरले भोल्युम र लोभको प्रभावको साथ कालो काजल प्रयोग गर्दछ। अनुहारको ताजा र चमक टोन, त्यो आधार, पाउडर, छाला र राम्रो मूड संग गर्छ।
डेमी मूर - स्त्री र सेक्सी, यो छवि उनको प्रयासबाट प्राप्त हुन्छ। यो उनको "रगत" हो। केहि छैन कि उनी आफ्नो पुरुष प्रतिनिधिहरूको तुलनामा उनको सुन्दर र धेरै सानोमा आकर्षित गर्छन्। तिनी सधैं जवान र ताजा हुन्छन्, तिनले संसारभरि महिलाहरूको अनुकरणको लागि एक उदाहरण दिन्छ।
तिनीहरूको शरीरमा रेखाचित्रहरूको लागि ताराहरूको प्रेम सबैलाई चिनिन्छ। त्यो डेमी मूरले टटू छोड्न सकेनन्। कामुक तस्वीर उनको बाहिरी कंधे ब्लेडमा अवस्थित छ। र अभिनेत्रीले प्रायः अस्थायी एनेटा टोटोटो बनाउँछ। यो सुन्दर, सुरक्षित, पीडाहीन र फैशनेबल छ।
ब्रेकियोनोज जस्तै जैकेट
एन्जिलिना जोलीको कपाल
ओस्कर 2015 कपडे
मेकअप पेनेलोप क्रुज
वेरा ब्रेज्नेवा - स्विमसटमा फोटो सत्र
सेलेना गोम्स - फोटो फिचर 2014
अन्तिम फोटो मारिन मोनरो
डेमी Lovato टैटू
यास्सिना Rossi फोटो फोटो बिना
अडिरी हेपर्न - जीवनी
Xenia Borodina काट्ने
Valmiera - पर्यटक आकर्षण
6 प्रकार मोटापा
एक जना मानिसलाई प्रस्ताव कसरी बनाउने?
बेज केश रङ
मेलानी चिशोलमले स्पाइस गर्ल्समा फर्कन सकेन
नाकको बिना तस्विर कसरी फाँट गर्ने?
Tervolin को बैग
के राम्रो छ - biorevitalization या mesotherapy?
हप्ताको लागि वजन घटाने आहार
केविन हैरिसले गायक टिन्शीशीसँग स्वागत गरे
30 व्यंजनहरू सेवा गर्ने पागल तरिकाहरू जुन हामी रेस्टुरेन्टमा लिप्त छौं
मासु र आलु संग पाई